कांग्रेस : न प्रशिक्षण, न त छ प्रचार, अनि हुन्छ पार्टी बलियो ? – प्रदिप गिरी – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
कांग्रेस : न प्रशिक्षण, न त छ प्रचार, अनि हुन्छ पार्टी बलियो ? – प्रदिप गिरी
प्रकाशित: २०७४ फागुन ९ गते २३:०६
आधुनिक किसिमका राजनीतिक पार्टीको उद्भव भएको विशेष समय भएको छैन। आधुनिक किसिमका भन्नुको पछाडि विशेष अर्थ छ। राजनीतिको उदय भएकै दिनदेखि राजनीतिमा पार्टीबन्दी रहन्छ। अझ भन्ने हो भने, मानव समाजमा उब्झिएका समस्या राजनीतिक बुझाइ हो। राजनीतिमा उब्झेका समस्यामा दलबन्दी, गुटबन्दी र पक्षपोषण भयो भन्न सकिन्छ।
महाभारतको लडाईँमा पाण्डपपट्टी हिँडेका शल्यलाई रातारात कौरवले आफूपट्टी मिलाए भन्ने कथा हामीले पढ्न पाउँछौँ। रामायणमा सुग्रिभ र हनुमानले रामचन्द्रसँग मिलेर बालीको बधसुरत गराए भन्ने उल्लेख छ।
लंका आक्रमण गर्दासमेत दाजु रावणको अंगद भएर बसेका विभिषण एकाएक राम आए भन्ने थाहा पाएपछि रामको शरणागत् भइ दाजुको भेद बताउन तयार भएका थिए।
पौराणिक कीर्तिमा त यस्तो छ भने अहिलेको राजनीतिमा भए गरेका कुरा नौला होइनन्। राजनीतिक विद्धानले भनेका छन्ः द्वन्द्व नै राजनीतिको प्राण हो। द्वन्द्व भएन भने राजनीति हुँदैन। त्यस किसिमको राजनीतिक पार्टी जमानादेखि नै थियो। तर, आधुनिक किसिमको राजनीतिक पार्टी बनेको विशेष समय भएको छैन।
राजनीतिक पार्टीका अध्ययताले यसलाई वेलायतको ग्लोरियस रेभुलुसन (गौरवमय क्रान्ति) सँग जोडेका छन्। वेलायतको गौरवमय क्रान्तिमा एकथरी राजावादी र अर्कोथरी राजा विरोधी भए। राजा विरोधीको एउटा आफ्नो समूह बन्यो र राजावादीको अर्को समूह बन्यो। १६ औं शताब्दिमा राजावादी र राजा विरोधी समूहबीचको द्वन्द्वका कारण त्यहाँ रक्तपातविहिन राज्य क्रान्ति भयो। राजावादीको समूहका नाम आजसम्म पनि चलिरहेको छ, जसलाई कन्जरभेटिभ पार्टी भनिन्छ। त्यसलाई पहिले टोरी भनिन्थ्यो। अलिकति राजा नमान्नेहरुको पार्टी रिजनल (क्षेत्रीय) पार्टीका रुपमा उपस्थित छन्। त्यसको इतिहास बारे हामी नजाउँ।
केही समयपछि वेलायतमा नयाँ पार्टीहरु अर्थात लिवरल डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी बने। त्यी पार्टीहरु कसरी बने? पछि जर्मनीमा र फ्रान्समा पनि पार्टीहरु बने। वालिग मताधिकारको अवधारणा आएपछि पार्टीहरु अवश्य रुपमा आउन थाले। मताधिकारविना पार्टी बन्दैन।
जब मानिसहरुले आफ्ना प्रतिनिधि चयनका लागि मत दिनुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला मानिसहरुलाई चुनाव लड्न मतदाता समक्षा जानु पर्दछ। आधुनिक राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रणालीसँग कसरी जोडिएको हुन्छ भन्ने विषयमा विद्धानहरुको भनाइ छ। जसरी वेलायत र अमेरिकाको पार्टी प्रणाली जोडिएको छ।
तर, नेपालमा चुनावले पार्टी प्रणालीलाई प्रभावित गर्दैन। हामीकहाँ पार्टीहरु पहिले बने र चुनाव पछि भयो। चुनावी प्रणाली ल्याउन हामीकहाँ पार्टीहरु बने।
अथवा, कम्युनिष्ट प्रणालीको कुरा गर्नका लागि हाम्रा पार्टीहरु बने। हाम्रो मुलुकमा पार्टीलाई प्रभावित गर्न दुई वटा प्राणालीः एउटा रूसमा लेनिनको अवधारणामा बनेको कम्युनिष्ट पार्टी, अर्को भारतमा गान्धी, नेहरु इत्यादि नेताहरु मिलेर बनाएको राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी।
लेनिनको अवधारण अनुसार बनेको रुसको कम्युनिष्ट पार्टी १९०३/४ तिर बनेको थियो। त्यहिताका भारतमा पनि राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्मेलन चलिरहेको थियो। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको विधान लामो समयसम्म लेखिएन।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको विधानकोबारे मोहनदास करमचन्द गान्धीजीले लेखेको आफ्नो आत्मकथामा त्यो विधान कसरी लेखेँ भनेर एउटा रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। जो विधान मस्यौदा समितिका एक जना सदस्य समेत रहेका थिए।
पार्टीको विधान चाहियो भनेपछि त्यो कसले लेख्ने भन्ने कुरा पार्टीभित्र चल्यो। त्यहिबेलामा म पनि पुगेँ। मैले पनि विधान चाहियो भनेको थिएँ। विधान कसले बनाउने भन्ने कुरा चल्यो। त्यसपछि ल ल तीन जनाको विधान लेखन समिति बनाउँ भन्ने कुरा आयो। विधानको कुरा गरेको कारण म फुच्चे मानिस भएर पनि समितमा बस्न पाएँ। विधान समितिमा सी विजयारागवचारी र अर्को एक गरी दुइजना नै ठूला नेता थिए। उनीहरुलाई विधान लेखनमा चासै थिएन। लेख लेख तैले नै लेख भने र मैले पार्टीको विधान त्यसरी लेखेको हो, भनेर आफ्नो आत्मकथामा गान्धीले बडो मजाकसँग लेखेका छन्।
यी दुई वटा शैलीः विधानको धारा धारामा झगडा गर्दै लेख्ने लेनिनको शैली र विधान लेखेको कुरा पार्टीले थाहै नपाउने भारतीय राष्टिय कांग्रेसको शैली। यी दुई वटा अद्भूत शैलीलाई तुलना गरेर अहिलेको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
अहिले नेपालका जति पनि कम्युनिष्ट पाटीहरु छन्, उनीहरु अहिले पनि लेनिनको कम्युनिष्ट पार्टीकै शैलीमा जनवादी केन्द्रीयता नै आफ्नो सिद्धान्त हो भन्ने गर्दन्।
कांग्रेसको संगठनको कुरा गर्दा यसको नेतृत्वदेखि, कार्यकर्ता र समर्थकलाई हामीले प्रश्न गर्न सक्दछौः के कांग्रेससँग पार्टी संगठनको कुनै सिद्धान्त छ? कम्युनिष्टहरु जनवादी केन्द्रीयता भन्दछन्, कांग्रेसको सिद्धान्त के हो त? कांग्रेसको संगठन सिथिल भयो, कांग्रसीहरु भोट दिन गएनन्, कांग्रेसभित्र अन्तरघात एउटा वाध्यतामूलक चरित्र बन्दै गयो, त्यो कुनै पनि हालतमा रोकिदैन भन्ने जस्ता कुराहरु अगाडि ल्याउँदा हामीले एक त कांग्रेसको वर्तमान विधान, दोस्रो कांग्रेस वर्तमान विधानमा पुग्नुभन्दा पहिलेका वैचारिक स्पष्टता र संरचनात्मक वाध्यतालाई ध्यान दिनु पर्दछ।
यो ऐतिहासिक परिचय कदापि आवश्यक थिएन। तर पनि मैले यो कुरा उल्लेख गरेँ। यो उल्लेख गर्नुको कारण के हो भने, हामीले कुनै पनि चिज हावामा बनाउँदैनौँ। हाम्रो पार्टीको विधानको कुरा गरिरहँदा हाम्रो दिमागको पछाडि अरु पार्टीको उदाहारण चलिरहन्छ। चीनको कम्युनिष्ट पार्टी, रुसको कम्युनिष्ट अथवा भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतीय जनता पाटी (भाजपा) भन्ने पार्टी छ। त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी अफ माक्र्ससिष्ट (सिपिएम) भन्ने पाटी छ, राष्ट्रिय कांग्रेस छ, अर्को नितेशकुमारको जनता दल युनाइटेड, लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल पनि छ।
त्यी पार्टीको संरचनागत विकास कसरी भयो? त्यो कुराको झझल्को हाम्रो चेतनामा अथवा अर्धचेनतामा परिरहन्छ। अब हामीले यहाँ प्रश्न गर्नु पर्यो कि, नेपाली कांग्रेसको संगठनको पछाडि आवश्यक तत्वहरु के के हुन्?
संक्षेपमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिलो, सबै पार्टी जस्तैः एमालेका, माओेवादीका, अथवा भारतको भाजपाका अथवा सिपिएम पार्टीको संरचनालाई एक पटक वालिग मताधिकार प्रयोग भएपछि गहिरो रुपमा प्रभावित हुन्छन्। अहिले पनि माओवादीको र एमालेको विधानमा जनवादी केन्द्रीयताको कुरा लेखिएको होला। भोलि पनि उनीहरुले यहि कुरा लेख्लान्। तर, त्यो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तबाट यी पार्टी चल्न सकेका छन् त भन्ने प्रश्नमा उनीहरु चल्न सकेका छन् वा छैनन् भन्ने होइन, चल्न सक्दै सक्दैनन्।
किन भने, एकपटक वालिग मताधिकार समाजमा सुभारम्भ भएपछि त्यसका आफ्नै गतिशास्त्र हुन्छन्। आखिर भोट माग्न त जनताको घर दैलोमा पुग्नैपर्छ। तपाईलाई जस्तै गालीगलौज गरे पनि तपाईकोमा दोस्रो पटक उम्मेदवार पुग्नु पर्छ र भन्नु पर्छ कि हिजोको कुरा विर्स।
हिँजो तपाईँले अन्तरघात गरेको कुरा मलाई थाहा छ र मैले नै तपाइलाई अनुशासनको कारबाही गरेको थिए। मेरै निर्वाचन क्षेत्रको तपाई हो र हाकाहाकी मेरो विरोध गर्नुभएको थियो अथवा कति त मेरै विरूद्धमा चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको थियो। यसका बाबजुद पनि तपाईको दैलोमा उम्मेदवार म भए भने पुग्नैपर्छ। यो वालिग मताधिकारको राजनीतिक गतिशास्त्र (पोलिटिकल डाइमेन्सन) सुरू भएपछि यसबाट पार्टीको सैद्धान्तिक सवाल मुक्त हुन सक्दैन।
आजको पार्टी संगठनसँग जोडिएका पाँच, छ वटा कुराहरू छन्। अर्थात, संगठनले गर्नुपर्ने कुरा पाँच, छ वटा हुन्छन्। कुनै पनि संगठनले आफ्नो विचारधाराको स्पष्टिकरण गर्नु अति आवश्यक रहन्छ। त्यो कुरा म संलग्न पार्टीमा भएकै छैन।
कुनै पनि संगठनले आफ्नो विचारधारासँग मिल्दो जुल्दो कार्यक्रमको जोडतोडले प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो पनि स्वीकार गर्छु कि, त्यो गरेको छैन। कुनै पनि पार्टी संगठनले आफ्ना विधारधारा, सिद्धान्त र कार्यक्रमका बारेमा आफ्ना कार्यकर्तामाझ नियमित प्रशिक्षण चलाउनुपर्छ। हामीले त्यो पनि गरेका छैनौं। प्रशिक्षण भनेको कार्यकर्ताहरुलाई बताउने र बुझाउने कार्य हो।
कार्यकर्ताको पक्तिभन्दा बाहिर आम जनतालाई बताउने कुरालाई प्रचार भनिन्छ। पार्टीको प्रचार शैली हुनुपर्छ। प्रचारको आफ्नै माध्यम हुनुपर्छ। जसरी एमालेले आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा बृद्ध भत्ता दियो भनेर अहिलेसम्म भँजाइराखेको छ। कांग्रेसले पनि विगत २० वर्षको अवधिमा केही न केही राम्रा काम गरेको त पक्कै होलान नि। त्यसरी गरेका राम्रा कामहरुको बारेमा मतदातालाई छोडिदिउँ हाम्रै पार्टी पक्तिलाई पनि सुसुचित गर्न सकिरहेका छैनौं।
हामी प्रचार शैलीमा कमजोर छौं। उल्टै प्रचारका नाममा हामीले बेलाबेलामा हाँस्यस्पद कुरा गर्दछौं। खासगरी हाम्रा विकासवादी मित्रहरु, नाउँ भन्नु परेन, बेलाबेलामा भन्ने गर्दछन् कि, हामीले नागरिकको हात हातमा मोबाइल पुर्‍यायौं। अस्ती एउटा कांग्रेसका एक जना मन्त्री बनेका मित्रले भन्नुभयो, ‘हामी आउँदा थोरै थियो हामीले सबैको हात हातमा मोबाइल पुर्‍यायौं।’
मोबाइल कांग्रेसका मन्त्रीले ल्याएको हो र? विश्वभरी मोबाइल सेवा फैलिएको छ। यस्ता हास्यास्पद कुरा गर्नु हुँदैन।
खास कांग्रेसले २० वर्षको अवधिमा देश र जनताका लागि के गर्‍यो त? यस बारेमा जनताले बुझ्न गरी भनेको खोइ? तसर्थ प्रचार र प्रशिक्षणमा फरक छ। के फरक छ भने, धेरै मानिसलाई थोरै कुरा बताउनु प्रचार हो भने थोरै मानिसलाई धेरै कुरा बताउनु प्रशिक्षण हो।
सय जना कार्यकर्तालाई विपीको समाजवाद, गान्धीवाद, माक्सवाद, लेनिनवाददेखि अर्थ नीति, मूल्य नीति, मुद्रा स्फूर्ति, भूमण्डलीकरणबारे पनि बतायौँ भने यो प्रशिक्षण भयो। हामीले पाँच वटा काम गर्यौं अथवा मधेस र मधेसीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि कांग्रेसले संविधानमा संशोधनको प्रयास गरेको थियो। तर, हाम्रो पार्टीले मधेसबाट किन मत बढाउन सकेनौँ त भन्दा हामीले यसबारेमा जनता समक्ष सही ढंगले प्रचार गर्न सकेनौं। त्यसको फाइदा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले उठायो। त्यसैले पार्टी संगठन सबै पक्षमा अर्थात प्रशीक्षण, प्रचारमा कमजोर देखियो।
संगठनको संरचनामा हाम्रो दुई खालको अर्थात साधरण सदस्य र सक्रिय सदस्यता छ। भनिन्छ, हाम्रा लाखौँ साधारण सदस्यहरु छन् र ४/५ लाख सक्रिय सदस्यहरु छन्। तर, कुनै पनि सक्रिय सदस्यलाई प्रश्न गर्दै तपाईँ त सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ, अर्को कुनै व्यक्ति साधारण सदस्य रहेछ।
साधारण र सक्रिय सदस्यमा के फरक छ भन्ने प्रश्न गर्यो भने उसले के जवाफ दिन्छ? ध्यान दिएर पढ्ने हो भने, पार्टीको विधानमा साधारण र सक्रिय सदस्यको व्याख्या फरक छ।
कांग्रेसको उद्देश्यप्रति सहमत हुने व्यक्ति साधारण सदस्य हुन सक्दछ भने कांग्रेसको उद्देश्य बुझ्ने, सहमत हुने र बुझाउन सक्ने सदस्य सक्रिय सदस्य हुने उल्लेख छ।
हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमिति भए पनि पार्टीभित्र रहेको अनुशासन हिनता, यो पार्टीमा पर्यायावाची बनेको अन्तर्घात व्याप्त छ। यो पार्टीको संगठनात्मक इतिहासमा एउटा कुरामा गौरव लिन सकिन्छ कि यो पार्टीले नेपाली शब्दकोषमा अन्तर्घात शब्दको अभयदान दिएको छ, हिमालदैनिकमा गिरिको विचार छ ।